Tokkummaa Mootummotaatti Ambaasaaddara Yunaaytid Isteetes kan ta’an Nikii Heelii imaltuu Itipoohiyaa keessatti gaggeessan har’a guyyaa lammffaa kan qabatee yoo ta’u har’a mooraa baqattoonni Sudaan Kibbaa keessa buufatan kan Gaambeellaa keessa jiru daw’atan.
Mummicha ministeera Itiyoophiyaa Haayle Maariyaam Dassaleeny waliin kaleessa kan wal argan Heeliin gama kaaniin haala nageenya Ardii Afrikaa keessaa fi dhimmoota kanatti hidhata qaban irratti Afrikaaf komishnara dhimmootii siyaasaa ka ta’an Sisomaa Saamaatii waliin dubbatanii jiran.
Heeliin Kaleessa tuuta oduuf ibsa kennaniin Yunaaytid Isteetes Afrikaa waliin hojjachuu akka feetu ibsan. Afrikaan qaama addunyaa akkaan barbaachisaa ta’u Yunaaytid Isteetes ni amantii jedhanii Afrikaa keessa carraa hedduun akkauma jiru qormaatiis jira. Kanaaf haaloota kana keessatti deggersaa fi gargaarsa gochuu feena jedhan.
Heliin haala Sudaan kibbaa, keniyaa fi kongoo keessa irratti kaleessa dubbatanii jiru.Imatuun isaanii itti aannu gara Suudaan kibbaatti jedhamee eegama.
Ambaasaaddar Heliin Moraa Baqattoota Kan Sudaan Kibbaa Gaambeellaa Keessa Jiru Daawwatan
Mugaabeen Ambaasadarummaa WHOf Muudamanii, Battaluma Kaafaman